Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Ny fahafatesan’i Nusrat Bhutto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Desambra 2011 4:00 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Ny fahafatesan'i Nusrat Bhutto  vao tsy ela, ramatoa vadin'ny filoha Zulfiqar Ali Bhutto teo aloha dia nanaovana fisaonana nanerana ny firenena. Tany Dubai, maty tao amin'ny tranon'i Benazir Bhutto zanany vavy efa nodimandry i Nusrat Bhutto, rehefa niady nandritra ny fotoana maharitra tamin'ny aretina Alzheimer.
Ny fahatsiarovana mampihetsi-po avy amin'i Cafe Pyala  dia manome fijery ara-tantara ny lova navelan'i Nusrat Bhutto ho an'ny tanora izay tsy nanatri-maso ny fotoan'androny:
@Reallyvirtual : Nilaza ny tany amin'ny fianaran-janako lahy fa andro tsy iasana rahampitso… Velona ry zareo laniany ny androm-piainantsika, maty ry zareo laniany ny androm-piainantsika.
@lablinks : Rehefa lasa raharaham-pianakaviana ny firenena, dia efa ampoizina ny fanakatonana ny tsena rehefa misy maty ao amin'ny fianakaviana.
@ReallyVirtual : ary dia potehin'izy ireo ihany koa ny toe-karem-pirenena, andro telo misesy tsy iasana be izao. Mahamenatra.
@jehan_ara : Ka tsy hisy izany ny Filan-kevitry ny governemanta amin'ny Alarobia. Misy afaka manazava ve hoe ahoana ny ho fanomezam-boninahitra an'i Begum Nusrat Bhutto? Misaonà fa maninona no mijanona miasa?
@bhopalhouse : Aleoko mipetraka any Pakistan, fa midika fikarohana bebe kokoa momba ny Alzaimera ny fahafatesan'i Nusrat Bhutto fa tsy andro tsy iasana amin'ny tsy misy dikany.
@sarahnaq  : Rehefa faly isika, milaza andro tsy iasana, rehefa ory isika, milaza andro tsy iasana. Tsy miasa isika ny Zoma, mazava ho azy tsy miasa isika ny Alahady.#pakistan 
@akchisti : Nahafinaritra i Nusrat Bhutto & misaona ny nahafatesany aho nefa “tsy mety” ny nametrahana andro tsy iasana sady mifanohitra amin'ny fomba fijeriny aza angamba. #PPP  #Pakistan 
@shakirhusain:  Mandria am-piadanana Nusrat Bhutto. Tiako kokoa raha fomba hafa no nankalazan'ny fanjakana azy fa tsy hoe andro tsy fiasana. #Pakistan 
@thekarachikid:  Tokony hisy rafitra fanairana SMS manerana ny firenena apetraka hamahana an'ity resaka fanambarana ny andro tsy iasana ity. #pakistan 
Nanoratra filazana manjò  i Ghazala Akber ao amin'ny Fianakaviana Paktea :
Mahatsiahy  izany vanim-potoana izany i Cafe Pyala:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/12/15/26289/
 Nusrat Bhutto: http://en.wikipedia.org/wiki/Nusrat_Bhutto
 Cafe Pyala: http://cafepyala.blogspot.com/2011/10/nusrat-bhutto-1929-2011.html
 @umairjav : https://twitter.com/#!/umairjav/status/128746623483392000
 filazana manjò: http://pakteahouse.net/2011/10/27/farewell-the-doyenne-of-the-house-of-bhutto